Kaaliyaha Google wuxuu yimaadaa Qalabka Bilaashka ah mahadnaqa SDK | Qalabka bilaashka ah
Kaaliyaha Google wuxuu yimaadaa Qalabka Bilaashka ah iyada oo ay ugu mahadcelineyso SDK
Toddobaadkii la soo dhaafey waxaan u naqaannay warar xiiso leh oo loogu talagalay dad badan oo jecel Qalabka Bilaashka ah, jiritaanka caawiye caawiye taas waan abuuri karnay mahadsanid guddiga Raspberry Pi iyo softiweerka Google.
Tani waxay sababtay joornaalka 'MagPi' inuu gabaabsi ahaado, laakiin sidoo kale wuxuu ku yeeshay raadad kale oo wanaagsan oo ku saabsan adduunka Qalabka Bilaashka ah. Shaqada Google ayaa sameysay SDK waxaa lagu abuuray Kaaliyaha Google.
In badan oo idinka mid ah ayaa weydiin doona Waa maxay SDK? Waxaan u qeexi karnaa SDK inuu yahay xirmo horumarineed softiweer. Xaaladdan oo kale, Kaaliyaha Google SDK ayaa noqon lahaa xirmo horumarinta Kaaliyaha Google.
Qalab aan noo oggolaan doonin oo keliya inaan abuurno barnaamijyo ku shaqeynaya barnaamijkan, laakiin waxaan sidoo kale ku isticmaali karnaa barnaamijyada kale ee aan ahayn Raspberry Pi. Marka Kaaliyaha Google wuxuu imaan doonaa Odroid, Orange Pi ama BeagleBone Black iyo kuwa kale.
Waxaan sidoo kale sameyn karnaa looxyo sida Arduino oo ku xiraya kaaliyaha dalwaddii oo xitaa adeegsan kara. Tan awgeed waa inaan tagnaa bogga rasmiga ah ee SDK oo noo soo dejiso. Nidaam dhakhso leh oo bilaash ah qof walba.
Este SDK waxay la shaqaysaa Python, sidaa darteed waxaan u baahan doonnaa oo keliya qalabka laga hadlayo inuu la jaan qaado barnaamijkan luqadda, oo ah wax ay guddiyada badankood u hoggaansamaan si dhammaystiran. Adeegsiga Kaaliyaha Google iyo SDKkan waa bilaash laakiin haddii aan rabno inaan u adeegsanno ganacsi ahaan, waa inaan la hadalnaa Google si aan u awoodno.
Google ayaa socota isla talaabooyinkii ay Amazon ku qaaday Alexa, wax faa iido u leh dhamaan isticmaaleyaasha Qalabka Bilaashka ah, laakiin Kaaliyaha Google iyo Alexa maahan kalkaaliyeyaasha dalxiis ee "bilaash" ah ee aan ku heli karno Qalabkayaga. In kasta oo ay tahay in la aqoonsado in haddii ay yihiin kaaliyeyaasha dalxiis ee ugu fudud ee la isticmaali karo Miyaanay kula ahayn?
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » General » Kaaliyaha Google wuxuu yimaadaa Qalabka Bilaashka ah iyada oo ay ugu mahadcelineyso SDK
Kaaliyaha Google waa xoogaa cabsi badan, sax?
Ku jawaab miguelgaton
Siemens waxay u keentaa daabacaadda 3D wax soo saarka tareenka
Wada-hawlgalayaasha Google ee leh Raspberry Pi si loo bilaabo Kaaliyaha Virtual